Pond na renirano - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2018-02 > Pond na renirano
Matetika ny farihy dia feno fotaka, ahidrano, critters kely ary sokitra. Ny dobo filoham-boankazo azon'ny loharano madio dia afaka mampiroborobo ny fiainana ary mbola miova amin'ny rano miandrona. Raha mbola ny rano kosa, tsy ampy oxygen. Ny zavamaniry algala sy ny fiompy dia afaka maka ny tsoa. Mifanohitra amin'izany, ny rano madio amin'ny ony mikoriana dia mamelona karazana trondro samihafa. Raha mila rano misotro aho, dia aleoko aleoko ny renirano fa tsy ny dobo!
Ny fiainantsika ara-panahy dia azo ampitahaina amin'ny dobo sy renirano. Afaka mijanona isika, toy ny kamory izay tsy misy mihetsika, izay tsy misy ilana azy ary mihantona ny fiainana. Na mahavokatra sy velona toy ny trondro any anaty renirano izahay.
Mba hitoerany vaovao, mila loharano matanjaka ny renirano. Rehefa ritra ny lohataona dia maty tao anaty renirano ny trondro. Ara-panahy sy ara-batana, Andriamanitra no loharanontsika manome antsika fiainana sy hery ary manavao hatrany antsika. Tsy mila miahiahy isika hoe mety hanary ny heriny Andriamanitra. Toy ny renirano mikoriana, mahery ary tsy mitsahatra hatrany.
Hoy i Jesosy ao amin’ny Filazantsaran’i Jaona: “Izay rehetra mangetaheta, mankanesa atỳ amiko, ka misotroa! Izay mino Ahy, araka ny voalazan’ny Soratra Masina, dia hisy onin’ny rano velona hiboiboika avy amin’ny tenany” (Jao. 7,37- iray).
Ity fanasana ho avy sy hisotro ity dia faratampon'ny andian-tsoratra miresaka rano ao amin'ity filazantsara ity: ny rano dia navadika ho divay (toko 2), ny rano fananganana indray (toko 3), ny ranon'ny fiainana (toko 4), ny rano fanadiovana any Betesda (toko 5) sy ny fitoniana amin'ny rano (toko 6). Izy rehetra dia manondro an'i Jesosy ho masoivohon'Andriamanitra, izay mitondra ny fiainana feno fanoloran'Andriamanitra.
Tsy mahagaga ve ny fikarakaran’Andriamanitra ny mangetaheta (antsika rehetra) eto amin’ity tany karakaina sy ritra tsy misy rano ity? Hoy i Davida: “Andriamanitra ô, Ianao no Andriamanitro, Izay notadiaviko. Mangetaheta Anao ny fanahiko, maniry Anao ny tenako any amin'ny tany karankaina tsy misy rano. » (Salamo 6.3,2).
Izay rehetra tiany hataontsika dia tonga ary misotro. Afaka mandeha sy misotro amin'ny ranon'aina ny olona rehetra. Maninona ny olona mangetaheta no mijoro manoloana ny loharano ary mandà hisotro?
Mangetaheta ianao, mety ho efa marary mafy eo aza? Moa ve ianao toy ny kamory? Akaiky ny fanavaozana sy ny fanavaozana dia akaiky ny baibolinao sy ny vavaka ataonao. Manantona an'i Jesosy isan'andro ary maka tazom-bolo mahomby sy mamelombelona avy amin'ny loharanon'ny fiainany ary aza adino ny mizara an'io rano io amin'ny fanahy mangetaheta.